crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> March | 2021 | HimiloNetwork
Himilo March 31, 2021	Leave a comment 620 Views
MUQDISHO (HN) — Degaan quruxsanaanta aalaaba waa astaan lala xiriiriyo degmadan oo aan xarunteedu ay bartamaha magaalada u jirto fogaan ku dhow 7 km. Waana gudaha marka aad usoo gashid dhexdeeda goorta aad fahmayso in Dayniile aysan kaliya lahayn muuqaal dabiici ah, balse adduun iyo waqti adag gelinayso in degmadu yeelato muuqaal soo jiidasho leh. Xarunta degmada oo ballac ahaan ...
Himilo March 29, 2021	Leave a comment 201 Views
MUQDISHO (HN) — Dilalka, afduubka iyo xariga aan sharciga ahayn ee lagula kaco suxufiyiinta waa sheekooyinka muuqda oo gu’yaal badan ay lasoo kulmeen iyaga oo gudanaya howlaha warbaahineed oo ay u hayaan umadda. Waxaase jira halgan gudaha ah oo suxufiyiintu ay maalinle ula nool yihiin kaas oo aan aalaaba helin madal lagfu gorfeeyo taas oo qaar badan ka dhigtay dhibanayaal ...
Himilo March 28, 2021	Leave a comment 132 Views
MUQDISHO (HN) — Maqalka magaalo xadaari ah oo qarniyo badan lala xiriirin jiray wax-soo-saar muuqda, ilbaxnimo iyo nolol sarreysa inay maanta kamid tahay magaalooyinka ugu dib-dhacsan dhulka Somaaliyeed, in badan, waxay ku tahay uur-ku-taallo iyo caloolyow. Waayo waxa aad isku weydaaran muqaalka maanta ka jira dhexdeeda iyo midkii ka jiray qanigii tagay dabayaaqadiisa. Waqtigaa ku keenay waayo adag, waxaana isugu ...
Maalinta Caalamiga ee Tiyaatarka.
Himilo March 27, 2021	Leave a comment 403 Views
MUQDISHO (HN) — Maalinta Caalamiga ah ee Tiyaatarka waxaa markii ugu horreysay unkay Machadka Tiyaatarka Caalamiga sannadkii 1961. Farriinta sannadlaha ah ee ku jirta Dhambaalka maalintan waxaa qoray jean Cocteau taniyo sannadkii 1962-kii. 27 March sannadkii 1962 oo ku beegan daahfurka Tiyaatarka Quruumaha, Machadka Caalamiga ah ee Tiyaatarka waxaa kamid noqday in ka badan 85 xarumood oo dunida ah kuwaas ...
Himilo March 20, 2021	Leave a comment 190 Views
MUQDISHO (HN) — Ciriiriga caasimadda waa mowduuc aan dhammaad lahayn ka hadalkiisa madaama uu noqday mid kamida ah dhibaatooyinka maalinlaha ah oo bulshada caasimadda ay la nool yihiin. Laakiin ma ahan wadda walba oo magaalada ku taal mid u ciriiri badan sida kuwa badan oo buuqa ka jira uu joogto ka yahay maalmaha qaar sida bilowga toddobaadka iyo dhammaadkiisa. Jidka ...
Masjidka Ohio oo dib albaabada loogu furay!
Himilo March 20, 2021	Leave a comment 299 Views
MUQDISHO (HN) — Covid-19 wuxuu beddelay habka iyo muuqaalka goobaha lagu cibaadaysto oo Masaajiddu kow ka yihiin halkaas oo kumaankun kamid ah dunida oo dhan albaabada la iskugu dhiftay si looga hortago faafitaanka xanuunka. Si kastaba, Xarunta Noor Islamic Cultural Center ee Ohio ayaa hadda albaabada u furaysa shan bilood kaddib si loogu cibaadaysto. Imam Abdel Moneim ayaa sheegay in ...
Himilo March 18, 2021	Leave a comment 141 Views
MUQDISHO (HN) — As three days passed since the order that makes wearing face masks in public became mandatory, the police patrol the streets to ensure the message is received. The Banadir administration has earlier this month called on the citizens of the capital to wear face masks and threaten to punish those who fail to abide by the law ...
Himilo March 17, 2021	Leave a comment 233 Views
MUQDISHO (HN) — Geeddi-socodka taariikhda, haweenku aalaaba waxay ahaayeen laf dhabarta bulshooyinka iyo aas-aaska xasiloonida iyo horumarka umadaha. Ogaanshiyaha kaalinta gabadha Muslimadda ah ay ku leedahay bulshada, dugsiyada sare ee New Zealand ayaa hadda soo kordhinaya barnaamij cusub oo lagula dagaallamayo aragtida qaldan ee laga qabo gabadha Muslimadda ah. “Dadku inta badan waxay u maleeyaan in haweenka Muslimiinta aan xor ahayn ...
Himilo March 17, 2021	Leave a comment 366 Views
MUQDISHO (HN) — Iyada laga duulayo hal-ku-dhegga ‘Open doors usually open minds and open hearts’ ‘Albaabo furan waxay aalaaba sii furaan maanka iyo qalbiga, dadaal ay wadaan Muslimiinta ku nool Victoria ayaa looga golleeyahay in xiriir dhow lala sameeyo deriska si loo dhaliyo is-faham labada bulsho ah. Dhacdada waxaa soo agaasimay Masjidka Virgin Mary Mosque. Booqadayaasha ayaa ku raaxaysan doona ...